(၇)နှစ်ကြာအောင် တိတ်တခိုးချစ်ခဲ့ရတဲ့ချစ်သူလေးနဲ့ ဒီကနေ့မှာ တရားဝင်ထိမ်းမြားလက်ထပ်လိုက်တဲ့ MRTV-4 မှ မင်းသားချော ဝေယံလင်း – XB Media & News
(၇)နှစ်ကြာအောင် တိတ်တခိုးချစ်ခဲ့ရတဲ့ချစ်သူလေးနဲ့ ဒီကနေ့မှာ တရားဝင်ထိမ်းမြားလက်ထပ်လိုက်တဲ့ MRTV-4 မှ မင်းသားချော ဝေယံလင်း
December 31, 2021 Bestie_Author Cele News 0
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…. MRTV4ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ဝေယံလင်းဟာဆိုရင် ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းမှ ပြီပြင် ပိုင်နိုင် စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့တခဲနက်အားပေးခြင်းကို ခံခဲ့ရတဲ့မင်းသားတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
မိုးကောင်ကင်အိမ်မက် ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ဆိုင်းမိုင်ရဲ့သူငယ်ချင်း ချစ်ချစ်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အပြင် ချစ်သူထွင်းတဲ့အက္ခရာဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်း ကျောင်းဆရာကာရိုက်တာနဲ့ပါဝင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ဝေယံလင်းဟာဆိုရင်အမှတ်တရားဘက်ကရပ်တည်ပြီ းစစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်၊
ဒီကနေ့မှာဆိုရင် ဝေယံလင်းကသူအရမ်းချစ်ရတဲ့ချစ်သူလေးနဲ့တရားဝင်လက်ထက်လိုက်ကြောင်းကိုယခုလိုပဲရေးသားဖော်ပြ လာပါတယ်။ ”သူမကိုရနှစ်အတွင်းအကြိမ်ကြိမ်မြင်ဖူးပါလျက်ခိုးကြည့်မိပြန်တယ်ဟောလှပြန်ပြီ”ဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြလာပါတယ်၊ပရိတ်သတ်ကြီးကလည်း ဝေယံလင်းတို့ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲလေးကို ဂုဏ်ပြုစကားပြောခဲ့ပါအုံးနော်..
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ…. MRTV4႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲရဲ႕မင္းသားတစ္လက္ျဖစ္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေဝယံလင္းဟာဆိုရင္ က်ရာဇာတ္႐ုပ္တိုင္းမွ ၿပီျပင္ ပိုင္ႏိုင္ စြာသ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕တခဲနက္အားေပးျခင္းကို ခံခဲ့ရတဲ့မင္းသားတစ္လက္ပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။
မိုးေကာင္ကင္အိမ္မက္ ဇာတ္လမ္းတြဲမွာ ဆိုင္းမိုင္ရဲ႕သူငယ္ခ်င္း ခ်စ္ခ်စ္အျဖစ္ပါဝင္ခဲ့တဲ့အျပင္ ခ်စ္သူထြင္းတဲ့အကၡရာဇာတ္လမ္းတြဲမွာလည္း ေက်ာင္းဆရာကာ႐ိုက္တာနဲ႔ပါဝင္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ေဝယံလင္းဟာဆိုရင္အမွတ္တရားဘက္ကရပ္တည္ၿပီ းစစ္အာဏာရွင္ကို ဆန႔္က်င္ေနတဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္၊
ဒီကေန႔မွာဆိုရင္ ေဝယံလင္းကသူအရမ္းခ်စ္ရတဲ့ခ်စ္သူေလးနဲ႔တရားဝင္လက္ထက္လိုက္ေၾကာင္းကိုယခုလိုပဲေရးသားေဖာ္ျပ လာပါတယ္။ ”သူမကိုရႏွစ္အတြင္းအႀကိမ္ႀကိမ္ျမင္ဖူးပါလ်က္ခိုးၾကည့္မိျပန္တယ္ေဟာလွျပန္ၿပီ”ဆိုၿပီးေရးသားေဖာ္ျပလာပါတယ္၊ပရိတ္သတ္ႀကီးကလည္း ေဝယံလင္းတို႔ခ်စ္သူႏွစ္ဦးရဲ႕လက္ထပ္မဂၤလာပြဲေလးကို ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာခဲ့ပါအုံးေနာ္..
Post Views: 20,174
ဒီကနေ့ အင်းစိန်ထောင်တွင်းတရားရုံးမှ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကို လူမင်းအား စီရင်ချက်ချလိုက်တဲ့အကြောင်း စိတ်မ ကောင်းစွာနဲ့အသိပေးလိုက်တဲ့ ခင်စံပယ်ဦး
မတရား အမိန့်ချခြင်းခံရတဲ အနုပညာရှင်မောင်နှမ တွေရဲ့ သားသမီးလေးတွေမျက်နှာမြင်ယောင်ပြီး စိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲနေတဲ့ သရုပ်ဆောင် ခိုင်သင်းကြည်